आयो दिन आयुर्वेदको
काठमाडौं–किर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका ११ सय ६० कोरोना संक्रमितमध्ये ११ सय जना स्वस्थ भइ घर फर्किएका छन् ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.रामआधार यादवका अनुसार संक्रमितलाई लक्षणका आधारमा औषधि दिने गरिएको छ । रुघा खोकीमा सिटोप्लादि चूर्ण, घाँटी खसखस गरेमा कस्तूर्यादि वटी र श्वासप्रश्वासमा समस्या आए श्वासखुठा रस दिइन्छ, जुन निकै प्रभावकारी ठहरिएको छ ।
‘आयुर्वेदिक औषधीले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । हाम्रै घर, आँगनमा पाइने जडिबुटी प्रयोग गरेर संक्रमितलाई निको पारेर पठाइरहेका छौं’, डा. यादव भन्छन्, ‘संक्रमित सबैलाई दिनको तिन पटक गुर्जो, जेठीमधु, त्रिकुट नबिराइ दिइन्छ ।’
जडीबुटीलाई चूर्ण या अवलेहका रुपमा मात्र नभइ टेब्लेटसमेत बनाएर दिन थालिएको छ । बिरामी पनि आयुर्वेदिक औषधी मन पराईरहेका छन् । डा. यादवका अनुसार ८५ प्रतिशत सामान्य लक्षणका विरामी आयुर्वेदिक पद्धतीबाट उपचार गर्दा ७ देखि १० दिनभित्रमा निको भएर घर फर्किने गरेका छन् ।
‘हामी रोकथाम र प्रतिरोधी क्षमता बढाउन नै बढी ध्यान दिन्छौं । हामीले दिने औषधीले तीन–चार आयाममा काम गर्छ । एउटै औषधिले रोकथाम पनि गर्छ, लक्षण देखिए निको पनि पार्छ’, डा. यादव भन्छन् ।
यो त औषधिको पाटो भयो । केन्द्रमा संक्रमितलाई योग र प्राणायाम गर्न लगाइन्छ । यसैगरी ‘म्युजिक थेरापी’ पनि दिइन्छ ।
‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आहार र दिनचर्याको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ’, डा. यादव भन्छन्, ‘आयुर्वेद औषधी, स्वस्थ र पौष्टीक आहार तथा व्यवस्थित जीवनशैली भएमा कोरोनालाई जित्न सकिन्छ।’
‘जेष्ठवासादी चूर्ण’ को जादु
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले खोप वा औषधि पत्ता लगाउन सकेको छैन । खोप, औषधिलगायत उपचार पद्धतिको खोजमा अनुसन्धानकर्ता भिडिरहेकै छन् । औषधि पत्ता नलाग्दासम्म सावधानी र सतर्कता नै कोभिड–१९ बाट जोगिने एक मात्र उपाय भएको चिकित्सक र वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
तर, कोरोना महामारीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनसके भाइरसको आक्रमणबाट बच्न सकिने तथ्यतर्फ पनि मानिस सजग हुन थालेका छन् ।
रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन खानपान, योग, जडीबुटीको प्रयोग बढदैछ । क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितलाई तनाव कम गरी रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउन योगाभ्यास र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग प्रभावकारी बन्दैछ ।
कोरोनाको प्रकोपसँगै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने ‘जेष्ठवासादी मिश्रण चूर्ण’ को माग निकै बढेको छ । विभिन्न १२ वटा औषधिय गुणयुक्त यो चूर्णको माग धान्न नरदेवीस्थित आयुर्वेद चिकित्सालयलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।
‘व्यक्तिगत मात्र हैन, संस्थागत रुपमा पनि चूर्णको अत्यधिक माग भइरहेको छ’, चिकित्सालयका निर्देशक डा प्रदीप केसी भन्छन्।
सर्वसाधारण मात्र होइन, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, चिकित्सक, पत्रकार तथा कोरोना उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्ति अधिकाँशले यो चूर्णको नियमित प्रयोग गरिरहेको डा. केसी बताउँछन् । संक्रमण बढ्दै जाँदा आइसोलेसनमा बसेका तथा अन्य व्यक्तिले चिकित्सालयबाट चूर्ण लैजाने गरेका छन् ।
११ भदौदेखि हालसम्म चिकित्सालयले करीब ४० हजार प्याकेट चूर्ण निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ । हाल दैनिक ७ सय बढी प्याकेट चूर्ण वितरण भइरहेको छ ।
‘एक पटक चूर्ण प्रयोगबाट लाभ लिएकाहरु दोहोर्याएर लिन आइरहेका छन्’, डा. केसी भन्छन्, ‘लाभ भएकै कारण माग बढीरहेको छ ।’
‘एस्टी’को क्लीनिकल परिक्षण
कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्वमा दुई सयभन्दा बढी खोपमाथि परीक्षण चलिरहेको बेला नेपालमा भने आयुर्वेदिक औषधिमा क्लिनिकल परीक्षण सुरु भएको छ ।
हाल प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल र वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधिमा क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भैरहवास्थित कोभिड प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, भैरहवा प्रयोगशालामा कार्यरत चिकित्सकहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि क्लिनिकल परीक्षण रोकिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्का आयुर्वेद अनुसन्धान विज्ञ डा.विशुन दयालप्रसाद पटेल बताउँछन् ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सुरुमा ५० जनामा क्लिनिकल परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । ‘हामीले पहिलो चरणमा दुई सयजनामा परीक्षण गर्ने योजनाका थियौं । तर, जनकपुर र वीरगन्जमा मात्र परीक्षण सुरु भएकाले हाललाई ५० जनामा परीक्षण गर्नेछौं’, डा. पटेल भन्छन् ।
डा. पटेलका अनुसार हालसम्म १० जनामा परीक्षण भइरहेको छ । क्लिनिकल परीक्षणअन्तर्गतका संक्रमितलाई २८ दिनसम्म निरन्तर विशेष औषधि खुवाइन्छ । त्यसको परिणामका आधारमा दोस्रो चरणको परीक्षण गर्ने परिषद्को तयारी छ ।
क्लिनिकल परीक्षणमा जेठीमधु, पिप्ली, मरिच र सुकेको अदुवामिश्रित औषधि ‘एस्टी’को प्रयोग गरिएको छ । परिषद्को सल्लाहमा यो औषधि सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादन भइरहेको छ ।
‘सामान्य रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता लक्षण देखिएका बिरामीमा परिक्षण सुरु गरेका छौँ । बिरामीलाई खाली पेट एस्टीको ट्याबलेट खुवाउछौं’, डा. पटेल भन्छन्, ‘परिक्षणमा समावेश हुनेको संख्या बढिरहेको छ, सकेसम्म धेरै संक्रमितलाई परिक्षणमा ल्याउने कोसिस भइरहेको छ ।’